Izitayile zeGele zamva nje ziNobuchule ngokulula: Bona bonke ubungqina
I-Rave News Digest: U-Anthony Joshua Humbled, u-Donaway we-Don Jazzy, uLiverpool + Okungakumbi
Fokanye okwethutyana, ibimalunga nesitayile esijwayelekile- sobugcisa - uyazi ezona zincinci-zithandwayo zizinto ezivele enkundleni kwiminyaka embalwa eyadlulayo. Ngandlela thile, besinothando ngomntwana omtsha kwibhloko, siyivumela ukuba ithathe indawo yeziko kuba ngokwenene zazingekho ezinye iindlela zesitayile esinokuxhomekeka kuzo.
Emva koko kweza i-boom! Apha akukho ndawo yaqala isizukulwane esitsha sabaculi abanobuchule bokudala kunye nokuzalwa koluhlu lweendlela ezintsha zobugcisa. Ixesha alinakuba lolugqibeleleyo, njengoko ubuchwephesha obahlukeneyo bokukhoncoza ubugcisa bokwenyani ngeli xesha lefashoni ekhawulezayo.
Ngoku, sikwinqanaba lokugqobhoza, kunye nezitayile ezininzi zobugcisa obunokutsha ukukhetha kuzo. Eli nqanaba lokwahluka alibonanga ngaphambili kwaye uyazi ukuba, asiphambuki kuyo. Ngokujija elingaphezulu kwaye ukhanyise i-gele yakho, uqinisekisiwe ukuba uzimele kuwo wonke umsitho oza kuwo.
Ukukugcina uphucukile kunye nenkqubela phambili kwi Gele Ngokwenyani, sijongise ezona zinto zintle zibonakalayo sidibene nazo kumaxesha akutshanje. Ukusuka kulwakhiwo lwe-auto-gele / ukwakhiwa okucwangcisiweyo ukuya kwisitayile esiphefumlelweyo se-Fulani, ezi zijongwa zakhiwe kubuhle bezobugcisa kwaye sasingakwazi ukubonakala ngakumbi.
Nantsi imbonakalo yokujonga izitayile zexesha elizayo ...
Ifoto yetyala: IG | NjengokuThunyelwe - iZitayile zeGele ze-2019
Izitayile zika-2019 zeGele ubuso bujongeka Izitayile zejeli kubafazi gele yamva nje ye-2019 Izitayile zexesha elizayo izitayile ezintsha ze-gele Izitayile zejeli zaseNigeria umakoti wasemantla Izitayile zejeli zemveli Ubuso obuthandekayo bubukeka umakoti wasentshona
UJessica Agorye Juni 3, 2019
I-4 eziphambili zokuthatha njengoko u-Kanye evula malunga nokuDibana kwakhe noPhazamiseko lweBipolar